Geerida Allah ha u naxariistee Daahir Xaaji Geele. | allsanaag
Geerida Allah ha u naxariistee Daahir Xaaji Geele.
Allah ha u naxariistee Xildhibaan Daahir Xaaji Cabdulaahi Faarax Shirwac maalimihii ugu danbeeyey noloshiisa, isaga oo aaminsanaa in geeridu xaq tahay ayuu ka wel welsanaa in dadka qaarkiis ay dhibaato u gaystaan .
Allah u maxariistee marxuumku maanta wuxuu ahaa nin caafimaad qabay oo howl maalmeedkiisii kaga xirnaa magaalaada Garowe ka soo dhamaystay, Goor ay fiidkii ahayd ayuu yimid huteelkii uu kaga jiray magaalada Garowe, isaga oo ay wada socdaan walaakiis wuxuuna halkaa ku cunay cunto Sugaar ah. Cuntaddii uu afka ku hayo ayuu bilaabay matag iyo inuu xanuunsado. Saacad ka dibna wuxuu ku geeriyooday Cisbitaalka Garowe.
Hadaba Wasaaradda caafimaadka Puntland iyo Cisbitaalka Garowe waa in sababta uu Xildhibaanku sida deg dega ah ugu dhintay ay baaritaan dhab ah ka sameeyaan.
Haadaanu nahay bahda Allsanaag waxaan tacsi u diraynaa qoysasaka Reer Xaaji Geele iyo reer Cumar Saalah Cawl. Marxuumkana Allah waxaan uga baryeeynaa denbi dhaaf.
Allah ha u naxariistee Xildhibaanku wuxuu ka soo jeeday labada Qoys ee ugu caansan magaalooyinka Dhahar iyo Badhan. Aabihiis Allah ha u naxariistee Xaaji Geele wuxuu ahaa ganacsade iyo Oday Soomaaliyeed oo laga wada yaqaanay Bariga Soomaaliya. Hooyadiisna Allah ha u naxarsiitee Faadumo Cumar Saalax Garaad Cawl, iayaduna waxay ka soo jeeday qoyska haya Saldanada Maakhir. Yaraantiisii waxay deris ka wada ahaayeen magaalada Buraan oo sakad wada deganaayeen Ilahaay ha u wada naxariistee dhamaantood Caaqil Cisamaan Awaare, caaqil Maxamed Qoobeey Oday Maxamuud Xasan oo dhalay Cali Ceelaayo iyo Oday Jamac faarx. Dhamaantood waxay ahayeen guurtidii beesha Maakhir.
← Daahir Cabdulaahi Faarax Shirwac Waxgaradka Gobolka Sanaag →